Shiinaha Cadaadiska biiro warshadleyda iyo soosaarayaasha BLPS-YKHL02 | Egret
Waxyaabaha cadaadiska cadaadiska
Waxay qaadataa isku xiraha isku xirka degdegga ah ama qaabdhismeedka alxanka biibiile naxaas ah, kaas oo dabacsan oo si fudud loo isticmaali karo iyada oo aan rakibid iyo hagaajin gaar ah lahayn. Nooca fiilada ku xiran iyo nooca siligga qaabka isku xirka korantada waxaa dooran kara dadka isticmaala markay doonaan. Meel keli keli keli kali ah ama laba cirif oo laba cirif ah, qaab dhismeedka xiriirka furan oo furan ama caadi ahaan xiran ayaa waxaa dooran kara dadka isticmaala. Indha-indheeye bir bir ah oo shaabadaysan ayaa ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
Mabda'a shaqada ee cadaadiska beddelka:
Marka cadaadiska dhexdhexaadka ah (dareeraha ama gaaska) ee nidaamka cadaadiska uu ka sarreeyo ama ka hooseeyo cadaadiska amniga ee la qiimeeyay, diaphragm-ka birta qaabeeya ee qaabku isla markiiba wuu boodayaa, wuxuuna riixayaa xiriiriyaha shidashada dabka ama xirida isagoo isku xiraya riixitaanka usha. Marka cadaadisku hoos ugu dhaco qiimaha soo kabashada ee la qiimeeyay, diskku si dhakhso leh ayuu dib ugu noqonayaa isla markaana furaha ayaa si otomaatig ah dib ugu noqon doona.
Tixraaca tirada cadaadiska guud ee cadaadiska bedka （halbeegga Mpa）
Jebinta qiimaha cadaadiska iyo dulqaadka
Isku xidhka qiimaha cadaadiska iyo dulqaadka
Caadi ah dhow
Shirkadeenu waxay nuugtaa fikradaha cusub, xakamaynta tayada adag, noocyo badan oo adeeg raad raac ah, iyo u hogaansanaanta samaynta alaab tayo sare leh. Ganacsigeenu wuxuu hiigsanayaa "daacadnimo iyo aaminaad, qiimo wanaagsan, macaamil marka hore", markaa waxaan ku guuleysanay kalsoonida inta badan macaamiisha! Haddii aad xiiseyneyso badeecadeena iyo adeegyadeena, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto!
Hore: Cadaadiska cadaadiska BLPS-YKHL03 Xiga: Cadaadiska cadaadiska BLPS-YKHL01
Beddelka Cadaadiska Hawada
Beddelka Cadaadiska Pneumatic
Wareejinta Xakamaynta Cadaadiska
Wareejinta Cadaadiska Rexroth
Wareejinta Cadaadiska Steam
Cadaadiska cadaadiska BLPS-YKM06
Cadaadiska cadaadiska BLPS-YKHL06
Cadaadiska cadaadiska BLPS-YK2X3
Cadaadiska cadaadiska BLPS-YKM05
Cadaadiska cadaadiska BLPS-YKHL03